Nbudata Scribus 1.4.8 Standard na Portable – Vessoft
Sistemụ nrụọrụ: Windows
Udi: Ngwaọrụ Office
License: Kennwere enwe
Ibe akwukwọ: Scribus
Scribus – a dị ike software maka akwụkwọ okirikiri nhọrọ ukwuu na ọkachamara larịị. The software na-enyere iji nna ukwu nke peeji nke na njikere ndebiri chepụta elu-edu e biri ebi na ngwaahịa. Scribus akwado ọtụtụ ederede formats na pụrụ iche ngwaọrụ maka elu ederede nhazi. The software nwere ya akwụkwọ format nke na-akwado ihe ndị kasị Akara ókwú, dị iche iche ederede na uwe, -ahụ anya na-ezo blocks. Ọzọkwa Scribus e dere ihe dị iche iche ngwaọrụ isere na shapes, agbanwe Njirimara nke akpọkwa na dezie PDF akwụkwọ.
Nnweta nke predefined page ndebiri
Nnweta ofthe paragraf na akara ederede ekwekọghị
Arụ ọrụ na PDF akwụkwọ
Creation nke e biri ebi na ngwaahịa
Pịa bọtịnụ ndụ ndụ iji malite ibudata
Download amalitela, lelee windo ihe nchọgharị gị. Ọ bụrụ na e nwere ụfọdụ nsogbu, pịa bọtịnụ otu oge ọzọ, anyị na-eji ụzọ nbudata dị iche.
Comments na Scribus
software metụtara software
Microsoft Office Excel Viewer – ngwanrọ nke na-agba, na-ele ma na-ebipụta ngwa ngwa elektrọniks na usoro nke Excel. Akụrụngwa ahụ na-enyere aka ilele dọkụmentị ahụ n’ụzọ dị iche iche ma gbanwee ụfọdụ nkọwa nke ibe.
Nlele nke Microsoft Office Word – ngwaọrụ eji adiri elele, detuo ma bipụta ya na akwụkwọ doc ma ọ bụ docx. Akụrụngwa ahụ na-arụ ọrụ na-enweghị wụnye Microsoft Okwu.
The ụlọ ọrụ ụlọ na-arụ ọrụ na ederede akwụkwọ na tebụl. Ọ na-akwado a ukwuu nke formats na ọrụ dị ka onye ọzọ Microsoft Office.
Amazon Kindle – emere ngwanrọ iji gụọ akwụkwọ Kindle na kọmputa gị. Akụrụngwa nwere arụmọrụ dị mkpa iji jikwaa ebe a na-edebe akwụkwọ elektrọnik.
Balaonin – ngwaọrụ iji gụọ ederede ọ bụla ma ọ bụ ederede ederede n’olu. Akụrụngwa na-eme ka ụda olu nke ederede dị iche iche site na olu dịgasị iche iche.
LibreOffice – otu nke analogs na-akwụghị ụgwọ na nke Microsoft Office. Akụrụngwa na-akwado ụdị ndị kachasị ewu ewu iji nweta mmekorita kachasị na ngwanrọ ọfịs ndị ọzọ.
Hụ ihe ngwanrọ
Software di nma
A haziri software a iji bulie foto dijitalụ maka ebumnuche ịchọta ha na intaneti ma kwado ihe modul maka nyochaa nke mbu na onyinyo a gbanwere.
Media Player Classic Home Cinema – onye ọkpụkpọ ama ama ama ama na nkwado nke ntọala dị iche iche maka imegharị faịlị faili dị elu. Ihe sọftụwia a na-enyere ike ịlele faịlụ ezughi oke ma ọ bụ juputara.
The software iji wụnye Linux sistemụ na flash mbanye ma ọ bụ ike mbanye. The software-akwado ndị na ọtụtụ ndị Linux nkesa, na nsụgharị dị iche iche nke usoro.